Akụkọ - Ọnọdụ ọrụ nke ịga ụlọ ọmụmụ nke ịga ụlọ ọmụmụ nke ọmụmụ nitrile / latex
Sterilization ọkwa gloves nwere ike kere abụọ na ụdị:
1. Mgbe ejiri nitrile / latex gloves wepu site na eriri imepụta glove, a na-agụ ha site na igwe, jiri aka tinye aka, wee zigara ha na ethylene oxide sterilization equipment for sterilization after packing. Enwere ike iji gloves dị otú ahụ n'ozuzu nyocha nyocha.
2. Mgbe ejiri nitrile / latex kpochapụrụ kpamkpam site na ebu aka, a na-asacha ya, gbanye ya, ma mịkpọọ ya ka ọ sachaa adịghị ọcha na elu nke nitrile / latex gloves, mgbe ahụ ndị ọrụ ga-aga ebe ọmụmụ aseptic maka ịmịnye akpa, Mbukota na ịkụ ọkpọ, ma mesịa zigara ethylene oxide ịga ụlọ ọgwụ maka ịgba ụlọ.
Etylene oxide sterilization bụ nhọrọ mbụ maka ịmị nwoke. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ozi gbasara sterilization nke ethylene:
1. terkpụrụ ogwu nwanyi nke ethylene oxide sterilizer
A na-akpọ usoro igbu ọchụ "alkylation"
Mmetụta nke ethylene oxide na ụmụ irighiri ihe na sel bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe
Site na nbibi DNA, protein denaturation, protein na DNA hinges, a na-akpụzi purine na pyrimidine, nke mere na protein nje mgbe mmeghachi omume na-efunahụ ọrụ, ka e wee nweta nsonaazụ nke nwoke ịga ụlọ ọgwụ.
2. Njirimara na usoro ịgba afọ nke EO ethylene oxide
Njirimara nke EO ethylene oxide:
Usoro Molekụl: C2H4O
Ebe esi: 10.8 ℃
Ize Ndụ: Etylene oxide bụ gas na-enwu ọkụ, nke enwere ike ijikọta ya na ikuku iji mepụta ngwakọta ihe mgbawa. Ọ ga-ere ọkụ ma gbawaa mgbe ekpughere ya na ọkụ na okpomọkụ dị elu; ọ bụkwa gas na-egbu egbu.
3. Ihe ndị bụ isi na - emetụta nsị nke ethylene oxide
Ngwunye oxide nke ethylene: na-abụkarị 400 ka 800mg / L.
Iru mmiri: na-ezo aka na iru mmiri ahụ (ọ na-abụkarị ihe na-erughị 30% RH); usoro mmeghachi omume nke ethylene oxide na isi mkpụrụ ndụ mkpụrụ ndụ (usoro alkylation) chọrọ mmiri; ọ dị na ọnọdụ gas n'oge usoro ịga ụlọ ọgwụ.
Okpomọkụ: Ọnọdụ sterilization ga-abawanye na mmụba nke okpomọkụ; oge ọ bụla okpomọkụ na-abawanye site na 10 ℃, ọnụ ọgụgụ igbu egbu nke spores na-abụkarị okpukpu abụọ.
Oge: Oge ịgba ọmụmụ ga - abawanye site na mgbakwunye nke oge ikpughe (ntụgharị oge obibi EO).
4. Okwu mmalite nye usoro ịgba afọ ụlọ kwa ụbọchị
Pretreatment-Nyefee-Mbido Mgbapụta-Leak Test-Mmiri Ọgwụ / Ijide Nrụgide-Ọgwụ Gas-EO Ibibi-Post Pumping-Scrubbing-Release-Analysis